Uhlalutyo lweVR Drone Autoflight | Drone ngekhamera ye-HD + iiglasi ze-FPV | Iindaba zeGajethi
Namhlanje sikuzisa Uhlalutyo lwedrone entsha Oko besikuvavanya iiveki ezimbalwa. Igama lakhe ngu I-VR Drone Autoflight Kwaye yidrone ekumgangatho ophakathi eyenzelwe ngokukodwa abaqhubi beenqwelo moya abafuna ukungena kwihlabathi lomntu wokuqala wokulinga (FPV) ngexabiso elifanelekileyo, ukusukela siyifumene nge-199 euros kuphela. Phakathi kweempawu zayo ezibalaseleyo sinekhamera ye-HD ebanzi, inkqubo yokuzibeka ngokuzenzekelayo eya kuthi incede kakhulu abaqhubi abangenamava ekuqhubeni. iza neeglasi zeVR Drone ezifakiwe kwiphakheji ngokwayo. Ngaba uyafuna ukubona ezinye izinto? Ewe, ungaphoswa luhlolo lwethu.
1 Uyilo lweVR Drone Autoflight kunye nezixhobo
2 Ikhamera yeDrone
3 Iimpawu zeDrone
5 Uphi ukuthenga i-drone?
8 Igalari yeDrone Photo
Uyilo lweVR Drone Autoflight kunye nezixhobo
Zombini isixhobo kunye nolawulo zenziwe ngaphakathi izinto ezisemgangathweni kunye nokuthinta okumnandi. Idrone yomelele kakhulu, iyamelana nokuwa ngaphandle kwengxaki kwaye iza ixhotyiswe ngezikhuselo esinokuzifaka ukwenza uvavanyo lwenqwelomoya wokuqala ngaphandle komngcipheko wokonakalisa iincakuba zesixhobo. Inkqubo ye- isilawuli siziva ngathi irabha imnandi kakhulu kwaye yongeza ibhonasi esemgangathweni kwimveliso. Ubunzima bolawulo bulula kakhulu, kufanelekile ukunqanda ukuba isandla sethu sidinwe ngexesha lokubaleka.
Umgangatho ukupakisha iphezulu kunokuba bekulindelwe kwimveliso yoluhlu; Iphakheji yomelele kwaye iza nesiphatho ke oko kusinceda ukuba sihambise idrone kamnandi. Ukongeza, zonke iimveliso ziza kulungeleka ngokupheleleyo ngeepads ezininzi ukuze sikwazi ukuzithutha ngaphandle komngcipheko wokuba zihambe kwaye zonakalise kuhambo.
Ikhamera yedrone I-engile ebanzi ye-HD kwaye ihambisa ividiyo ebukhoma ukuze ikwazi ukwenza iindiza ze-FPV. Ikwavumela ukuba urekhode imifanekiso kunye nevidiyo, kokubini kwikhadi le-SD kwaye ngqo kwimemori ye-smartphone. Ukurekhoda kwikhadi le-SD kuya kufuneka uyikhuphe ikhamera kwi-drone (kuya kufuneka ucofe ithebhu) kwaye ngaphakathi uza kubona indawo apho ungabeka khona ikhadi eliza ngaphakathi kwimemori ye-USB.
Ikhamera inokuhlengahlengiswa kwizikhundla ezahlukeneyo, esinceda kakhulu ukunqanda iibhloko eziza kuvela kwiividiyo xa sifuna ukwenza ividiyo yendiza kunye nokulungelelanisa umbono ofanelekileyo xa siza kubhabha kumntu wokuqala.
Njengoko besesiphawulile ngaphambili, iVR Drone Autoflight sisidrone sokuqala Kulula ukubhabha. Ikwanayo nemowudi yokuma kwayo ekwaziyo ukufumanisa izinto ezikwindawo yayo ukukuthintela ekwenzeni intshukumo ebeka ingozi enokwenzeka kwingozi. Eli nqaku lilungile kubasebenzisi abangenamava kodwa kunokuba nzima ukusebenzisa xa ungumqhubi wenqwelomoya onamava.
Isixhobo somelele kwaye sinobunzima obufanelekileyo ukuze ndikwazi ukubhabha ngaphandle nangomoya olinganiselweyo. Ixesha lokuphendula lichanekile, elivumela ukuba idrone ibhabhe ngokulula. Iza ifakwe iqhosha lokususa elizenzekelayo kunye nokufika, ulawulo olugqibeleleyo, isantya ezibini kunye nemo yokuma evumela ukuba senze iilogo ezingama-360º ngokuchukumisa isitshixo. Ngokweemvavanyo zethu, Ibhetri inika imizuzu eli-15 yokubhabha, ezincitshisiweyo kancinci ukuba sibeka ukhuselo lwee-blade xa siphulukana ne-aerodynamics yeseti.
Iiglasi zeVR Drone zezi Imodeli yeglasi yokuqala elula kakhulu. Ngokusisiseko bayimeko apho kuya kufuneka ufake i-smartphone yakho ukuze ukwazi ukusebenzisa indlela yokuqala yokulinga umntu kwaye ukwazi ukonwabela amava okuqala kule ndlela yenqwelomoya. Ukubekwa kwayo kulula kakhulu, ufaka usetyenziso lwedrone kwiselfowuni yakho, vula islot, ubeke i-smartphone uyilungelelanise kwindawo efanelekileyo ukuze ukwazi ukubona icandelo ngalinye lesikrini ngeliso ngalinye, ulibuyisele kwiiglasi kwaye ungaqala ukubhabha.
Ingxaki kolu hlobo lweenkqubo ezisebenza kunye neefowuni eziphathwayo kukuba zihlala zikhona lag encinci kwividiyo, ekuthi ngokwenza oko kube nzima kuthi ukuba sivavanye i-drone ukuba asinamava athile, ke oko asikucebisi ukuba usebenzise le ndlela yokubhabha kwiiveki zakho zokuqala ngesixhobo.
Uphi ukuthenga i-drone?
I-VR Drone Autoflight Iyafumaneka kwivenkile ekwi-intanethi yeJuguetronica ngexabiso le- € 199. Njengoko sele siphawulile, yi Ixabiso elihle kakhulu lemali Idrone yenqanaba lokungena ekulula kakhulu ukubhabha nkqu nakwabaqhubi beenqwelomoya abangenamava.
Kulula kakhulu ukubhabha
Yomelele kwaye ikumgangatho olungileyo
Ukulibaziseka kwevidiyo kwimowudi ye-FPV
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lweVR Drone Autoflight
Iya kuba njalo iXiaomi Mi Band 3?